I-Ministries ye-intanethi-Iicawa zeKomiti yokuHlola iNtlekele kaKristu
Iqela leempendulo zeNtlekele lifumaneka ngokukhawuleza kwibandla lendawo kwingingqi ehlelwe yintlekele. Injongo yeCandelo loKuphendula iNtlekele kukunceda ibandla lasekuhlaleni ukufumana nokufumana amavolontiya ekuncediseni iimfuno zemoya kunye neengxaki zomoya kunye nezoncedo ekuhlambulukeni nasekuhlaleni.
Iqela leMpendulo yeNtlekele liza kuzisa ezi zilandelayo kwiziko leentlekele ukunceda ibandla lasekuhlaleni ukuba lifikelele kuluntu lwayo:
Iidrailer zixhobo ezipheleleyo
Iqela leMpendulo yeNtlekele lithenga ukutya okunikezelwa kuyo yonke indawo kwimimandla yentlekele kunye nezinto zokwakha, iimpahla zasemakhaya, izixhobo, ukukhutshwa kwezinto zokungcola, njl.
YINTONI IIMISEBENZI ZEMISEBENZI YEMPENDULO YENDLELA
Abaqeqeshi be-Volunteer Coordinators baxhaswe nge-1st baziswa ukuba bancede ibandla lakho lenze umzamo wokunceda osebenza kunye nokuhambisa, ukuhlambulula nokuvuselela izigaba
I-30 'yeNtengiso yeTekisi yeShishini yaseKhaya efakwe kwi-3,000-4,000 isidlo / imini ukuya kuluntu nakwiivolontiya
I-1st Response Semi Tool Trailer kunye neetekisi eziliqela ezongezelelweyo zixhobo ezifakwe kwi-generator, ii-saws, iifosholo, iinqwelo, ii-barbarrows, ngokuqinisekileyo nayiphi na isisitye esiya kufunwa ngamavolontiya
Ama-RV angeniswa ukuze ancede amavolontiya asekhaya
I-trailer yokusetyenziswa kwevolontiya
Idatha yamawaka amavolontiya abhalisele i-DRT ebizwa ukuba isebenze
Iqela leempendulo zeNtlekele unceda ukuthenga ukutya kunye nezinto zokwakha
Siya kuvuyiswa ukubonelela nayiphi na enye inkcazelo onokuyifuna. Sifumaneka ukuza ebandleni lakho ngenjongo yokwenza imizamo yokudlulela kwangaphambili. Nceda uqhagamshelane neQela lokuPhendula leNtlekele ukuze uhlele umboniso.
Ukuba unqwenela ulwazi olungakumbi qhagamshelana no-Steve Liles kwi-937-689-5725 okanye uKaren Kofahl kwi-214-734-9647.